Fikarohana momba ny firaisana April Danielle Ryan tamin'ny niorenan'ny vovoka an'i Ida Bell Wells-Barnett: Mpanao gazety Afrikana-Amerikana sy mpitarika ny zon'ireo olon-droa any an-toeran-kafa - Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana
Aprily Ryan ho fampisehoana indray ao amin'i Ida Wells-Barnett
Mpanohana ny ReincarnationResearch.com dia nanolo-kevitra fa i April Ryan, mpandalina ara-politika CNN, izay nantsoina hoe Journalist an'ny taona nataon'ny Fikambanan'ny Mpanao gazety mainty hoditra, dia mety ho ny vatana vaovao indray ao amin'i Ida Bell-Wells Barnett.
Ida Wells-Barnett dia mpanao gazety Afrikanina-Amerikanina ary mpitarika ny Hetsika ny zon'ny olom-pirenena tany Etazonia. I Ida, izay teraka tamin'ny naha-andevo azy tamin'ny 1862, dia navotsotra tamin'ny fanambarana Emancipation an'i Abraham Lincoln nandritra ny ady an-trano amerikana.
Nanampy i Starta Memphis Free Speech sy Hairaha gazety ary nanala sarona ny horohoro tamin'ny famonoana ny mainty amerikana izy. Navitrika tamin'ny hetsika Suffragette Vehivavy koa izy, izay mitarika ny zon'ny vehivavy amerikana hifidy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endriky ny Ida Wells sy April Ryan dia mitovy. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Ny fiainana taloha Talenta sy ny fijaliana: Ida Wells sy April Ryan dia samy mpanao gazety avy amin'ny fahamendrehana goavana sy mpisolovava ho an'ny zo sivily any Etazonia.